Mametraka Plugin : Lisitry ny sariitatra mila plugin plugin WooCommerce hametrahana azy.
Asabotsy 8 Aogositra 2020
Ny fitsaboana tsara tarehy avy any Sahara
PArivo taona, ny fitsaboana avy any amin'ny Efitr'i Sahara kosa anefa dia ny fitsaboana vaovao ho an'ny spa eran'izao tontolo izao.
Ronono rameva: ny hatsaran-tarehy sy ny fananana ara-pahasalamana.
Ny ronononan'ny camel dia manana vinaingitra be mineraly (vy), vitamins (A, B, C), elastin ary lanolin. Manana asidra mamy koa izy io izay manampy amin'ny fanavaozana ny sela. Manana toetra mampitony, mahasalama ary antioxidant. Tena tsara ho an'ny hoditra marefo. Ny ronono Camel no ampiasaina matetika amin'ny savony, fa misy koa ny creams, ny fikarakarana ny volo, ny fiarovana ny masoandro. Raha ampiharina amin'ny hoditra izy io dia mazava ho azy fa ny fisotroana azy dia ny rononon-dreny no mitondra soa be indrindra amin'ny vatana. Tena namana tsara.
Biby maingoka malefaka: Argan vaovao.
Vary avy amin'ny voankazo, ny menaka vita amin'ny menaka dia nambolena tany an-tany lemaka Maraokana. Ny menaka prickly dia manana fatran'ny asidra matavy tena izy, omega 6 ary omega 9, fa ny mampiavaka azy dia ny atiny amin'ny vitamin E sy delta-7-stigmasterol, antioxidant mahery iray eo amin'ny tontolon'ny zavamaniry. Izy io dia mamerina amin'ny laoniny ny fihenam-po sy ny feo amin'ny hoditry ny tarehy ary mampivoatra ny fizotran'ny voajanahary fanarenana ny hoditra. Misy fiantraikany tsy manam-paharoa amin'ny anti-fahanterana. Emollient tena tsara, manalefaka ary miaro ny hoditra tsy ho tratry ny dehydration. Mamela sarona malefaka sy sataly eo amin'ny hoditra izy. Izy io koa dia tena fikarakarana fery amin'ny lolo sy ny crevice.
Ity menaka sarobidy, mbola tsiambaratelo, dia lehibe argan mpifaninana amin'ny menaka, tsilo poara menaka manana mihasimba na dia tsara kokoa noho ny "mpiray tam-po" sy ny hanitra no mainka mangidy.
Psammotherapy: eo amin'ny fasika mafana.
Araka ny voalaza ao amin'ny lahatsoratra teo aloha, psammotherapy (antsoina koa hoe psammatotherapy) na fitsaboana arintany dia fanao amin'ny razambe any Afrika Avaratra. Tafiditra ao anaty vatana iray mandritra ny folo minitra farafahakeliny ao anatin'io fasika mafana io mba hanamaivanana rheomatisma, arthritis na lumbago. Toy ny ao anaty sauna, dia levona ny poizina ary miala lalina ny hozany. Ity fanao ity dia mitranga ao amin'ny spa. Ny sandbox iray maina ho an'ny 45 ° dia ahafahana manarona ny vatana mpikaroka miaraka amin'ny tsatoka vitsivitsy.
Inona ny hevitrao ?x
Lahatsoratra maro kokoa ao amin'ny bilaoginay www.panafricanbeauty.com
Bruly Bouabré, mpamorona ny abidia Bété ao Côte d'Ivoire
Ny Baiboly 1500 taloha dia nilaza fa tsy ho nohomboana i Jesoa
Ny lalana efatra hahomby - Wayne Dyer (Audio)
Tsindrio etsy ambany mba hanomezana hevitra
Azafady Login amin'ny fanehoan-kevitra
28 andro lasa izay
Ny ronono labiera dia ampiasaina amin'ny savony, fa misy koa menaka, fikolokoloana volo, fiarovana ny masoandro
ATOLOTY NY ARTIKO ANY AMINY
Tsindrio eto ambany raha hamoaka lahatsoratra
Mamorona kaonty vaovao
Fenoy ny taratasy eto ambany mba hisoratra anarana
*Amin'ny alàlan'ny fisoratana anarana ao amin'ny tranokalanay dia manaiky ny Fepetra sy fepetra amin'ny politika fiarovana fiainan'olona.